MADAXWEYNE FARMAAJO oo safar ka duwan kuwii hore ku gaadhi doona dalka Jabouti. – Xeernews24
MADAXWEYNE FARMAAJO oo safar ka duwan kuwii hore ku gaadhi doona dalka Jabouti.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku wajahn yahay magalada Jabouti ee xarunta dalka Jabouti.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalinta beri ah uu ka ambabaxo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, isaga oo gaadhi doona dalka Jabouti.
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa wehlin doona Wasiiro, Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ka tirsan dowlada Soomaalia kuwaa oo mudada uu Madaxweynaha ku nagaan doono Jabouti la kulmi doona dhigooda dalkaasi.
Magaalada Jabouti ayaa waxaa loogu diyaar garoobaya soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaalia iyo Wafdigiisa oo halkaa ku nagaan doona muddo laba cisho ah, sidda aan xogta ku heleyno.
Xogta aan heleyno ayaa waxa ay tilmaameysaa in booqashada Madaxweynaha Soomaalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo ay salka ku hayso xoojinta xidhiidhka soo jireenka ee Labada dal iyo guud ahaan arrimaha gobolka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale dhigiisa Jabouti kala hadli doona dhex dhexaadin la doonaayo in laga dhex sameeyo Jabouti iyo Eriterea oo khilaaf diblumaasiyadeed uu ka dhexeeyo.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo waxa uu dhigiisa Jabouti la wadaagi doonaa wixii kasoo baxay kulan uu magaalada Muqdisho kula qaatay Wafdi ka socda dalka Eriterea oo uu kala hadlay wadahadal laga dhex abuuro Jabouuti iyo Eriterea.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la rajeynaa inuu soo afjaro mad madowga siyaasadeed ee ka dhex jira labada dal, kadib markii Jabuuti ay ka cadhootay hadalkii Madaxweynaha Soomaaliya uu ka sheegay Asmara, kaasi oo ahaa in cunaqabateynta laga qaado Eritrea.
Booqashada Farmaajo waxay ku soo beegantay wakhti dawlada jabuuti la sheegey in ay gashay go,doon siyaasadeed waxaa sidoo kale xusid mudaan in ay dawladda Itoobiyana wafti heer sara ah usoo dirtay dalka Jabuuti wararku waxay tibaaxayaan in Soomaaliya iyo Itoobiya ay wada qorshee lagu kulansiin Geelaha Jabuuti iyo Afeworki-giiga Erytrea si degmada geeska Afrika loogu soo dabaalo xasiilooni siyaasadeed haday arintaasi suurta gasho waxay noqon doonta markii koobaad ee wadamadda geeska Afrika gaar Soomaalia,Itoobiya,Jabuuti iyo Erytrea ay yeeshaan xidhiidh siyaasadeed oo nabad ku salaysan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/122-640x379.png 379 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-15 19:41:282018-08-15 19:41:28MADAXWEYNE FARMAAJO oo safar ka duwan kuwii hore ku gaadhi doona dalka Jabouti.
Itoobiya oo ka hadashay waxaa laga damacsan yahay Liyuu Booliiskii Cabdi Il... Dowladda Qadar oo ku dhawaaqday Go’aan si weyn uga farxiyey isna garab taagtay...